အလွယ်ကူဆုံး သူဋ္ဌေးဖြစ်နည်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အလွယ်ကူဆုံး သူဋ္ဌေးဖြစ်နည်း…
Posted by Ko out of... on Mar 6, 2012 in Copy/Paste |7comments
တခါက သူဋ္ဌေးဖြစ်နည်းစာအုပ်မျိုးပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ကိုရေးသည့် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရှိလေသည်။
တနေ့သောအခါ သူ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦးက ခွက်ကလေးတစ်လုံးနှင့် လမ်းဘေးတွင် တောင်းစားနေသော
ထိုစာရေးဆရာအား တွေ့လိုက်လေသည်။ သူက တအံ့တသြ ဖြင့် ထိုစာရေးဆရာအား မေးမြန်းရာ . . .
ဆရာ ဆရာကိုယ်တိုင် သူဋ္ဌေးဖြစ်နည်းစာအုပ်ကိုရေးသားပြီး ဘာဖြစ်လို့ ဆရာကိုယ်တိုင်
ဒီလိုခွက်လေးတစ်လုံးနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ဘာဖြစ်လို့ တောင်းစားနေရလဲဆရာ.. .
အေး…ငါရေးတဲ့သူဋ္ဌေးဖြစ်နည်း ပေါင်းတစ်ရာကျော်မှာ ဒီတောင်းစားတဲ့ နည်းက အလွယ်ကူဆုံးလေကွာ ဆိုပြီးပြော လိုက်သတဲ့…
ပြောချင်တာ ယနေ့ ဒို့နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးပြီး အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ သိပ်နည်းနေပြီ သူများပေးတဲ့ အကူအညီကို စောင့်မျှော်နေတာတို့၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိမမြင်ရတဲ့ အရာကို သိတယောင်ယောင် ဟန်ဆောင်ပြီး လူတွေကို လိမ်နေတဲ့လူတန်းစားတွေကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်တာတို့၊ လက်တွေ့မကျတဲ့ စိတ်ကူးအတွေးတွေဟာ သူတောင်းစား ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ တွေဘဲ. . .ဒါတွေကို ဒို့လူငယ်တွေ အလွတ်ကျက် သင်ယူခြင်း ချည်းချည်းမလုပ်ဘဲ..ဝေဖန်ပိုင်ခြားခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်နော
We learn dog and we educate man. ယခု လိုပညာခေတ်ကြီးမှာ Educate လုပ်နိုင်မှ ဒို့နောက်မကျမှာ . . . အခုတော့သူများ ဘာပြောပြော ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ လို့ဘဲလွယ်လွယ်နဲ့ခေါင်းငြိမ့်နေကြတော့ . . . လွယ်လွယ်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့် တဲ့လူဟာ ကြာလာရင် ကိုယ့်အခန်း ကဏ္ဍပျောက်သွားမယ်လို့ လူငယ်တွေကို အသိပေးမျှဝေ လိုက်ပါရစေ..
ယနေ့ ဒို့နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးပြီး အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ သိပ်နည်းနေပြီ သူများပေးတဲ့ အကူအညီကို စောင့်မျှော်နေတာတို့၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိမမြင်ရတဲ့ အရာကို သိတယောင်ယောင် ဟန်ဆောင်ပြီး လူတွေကို လိမ်နေတဲ့လူတန်းစားတွေကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်တာတို့၊ လက်တွေ့မကျတဲ့ စိတ်ကူးအတွေးတွေဟာ သူတောင်းစား ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ တွေဘဲ. . .ဒါတွေကို ဒို့လူငယ်တွေ အလွတ်ကျက် သင်ယူခြင်း ချည်းချည်းမလုပ်ဘဲ..ဝေဖန်ပိုင်ခြားခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်နော
တောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ စကား ဟာ လွယ်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တစ်ကယ်မလွယ်တဲ့ အလုပ်နောဗျ ။ ဒီလိုရေးလို့ တောင်းစားဖူးတယ်လို့ လဲ မထင်ကြပါနဲ့ ဦး ။ တစ်ခြားမပြောနဲ့ ၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းဆီကနေ ဘဲ အရင် မုန့် ဖိုး ၊ လဘက်ရည်ဖိုး အရင် စမ်းတောင်းကြည့်ရင် တန်းသိရမှာပါ ။ တောင်းတဲ့အခါ မျက်နှာအနေအထား ၊ ကိုယ်အမူအရာ ၊ အသံ … အိုဗျာ အများကြီးပါဘဲ ။ ပြောချင်တာကတော့ ၊ ဘယ်အရာမှ မလွယ်ပါဘူး ။ အဲ…တောင်းစားမယ်ဆိုရင်တောင် ၊ အရင်းအနှီးအဖြစ် ၊ ခွက်တစ်လုံးလောက် ရှိမှ ဖြစ်မှာပါ ။
တစ်ချို့များကောင်းလျက်နဲ့ ၀တ်ကောင်းစားလှဝတ်ပြီးတောင်းတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိသူတောင်းစားများ
ကလည်းရှိသေး ပြောချင်တော့ပါဘူး ခဏနေလက်ကောက်ဝတ်ကယားယားလာလို့……..
ခွက်ထဲ ထည့်ဖို့ ခဲလည်းရှုာရဦးမှာဗျ နော် ကိုပေ..
ယခုခေတ်မှာ တောင်စားတယ်ဆိုတာလည်း အသွင်သဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးရှိတယ် ဟန်ဆောင်ပြီးတောင်းစားတဲ့ လူတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မသိနိုင်ဘူး…
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်မှာ တောင်းပုံတောင်းနည်းတွေကလဲ လိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားပြီလေ
သူတို့ကလဲ အမြဲ up to date လုပ်နေကြတာဘဲ….ခေတ်ဟောင်းအတိုင်းတောင်းရတာ အဆင်မပြေတော့ ပြောင်းလဲရတော့တာပေါ့………..စော်ကားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး နတ်ဆိုးလေးလဲ မြန်မာလူမျိုးဘာပဲ.. ကိုးကွယ်တာလဲ မြတ်စွာဘုရားရှင်ပါ…ဒါပေမဲ့ မန်းလေးမှ သံဃာတော်တွေ (အများဆုံးက ကိုယ်ရင်တွေ၊ သီလရှင် ပေါက်စလေးတွေ) အလှူခံနေကြတာဟာ မနှိုင်းချင်ပါဘူးဗျာ….နတ်ဆိုိးလေးကနေ ကြာရင်ဒါတွေပြောရတာနဲ့ နတ်ဆိုးကြီးဖြစ်တော့မယ်….. မန်းလေးမှာနေတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီး သိပါတယ် ဘယ်လိုဘယ်ပုံဖြစ်နေကြလဲဆိုတာ….မန်းလေးက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ကြီးတွေ အနေနဲ့ ကြပ်မပ်သင့်တယ်လိုထင်ပါတယ်…နယ်တွေရောက်တော့တစ်မျိုး အကြီးပိုင်း သံဃာတော်တွေပါ အယောင်ဆောင်တွေအရမ်းဘဲပေါပါတယ်….နတ်းဆိုးလေးတော့ ငရဲပါရောက်တော့မယ်နဲ့တူတယ် အရပ်ကတို့ရေ့ ကယ်ကြပါအုံး နတ်ကွန်းလေးဆောက်ပြီးတော့ ;-0